Amakhasimende amaningi aphakamisa izinhlelo ezintsha zokuhlanza imakethe yasendaweni emazweni ahlukene, kumakhasimende ahlukahlukene esinganikeza ngochungechunge lwezixazululo njengoba kudingeka. Kuze kube manje sithumela umshini wokuhlanza namathuluzi wokuhlanza eningizimu-mpumalanga ye-Asia naseYurophu iminyaka engaphezu kwengu-10.
Ikhasimende nekhwalithi kuqala
ISAYENSI, UKUSEBENZA KAKHULU NOKUVIKELWA KWEZEMVELO
Ukusebenzisana kubaluleke kakhulu, wonke umuntu kufanele abe namandla okubambisana nabanye. Sineqembu elihle kakhulu:
Ukuthengisa- Ukuthengisa AKUTHENGISI izimpahla zabo kuphela. Kufanele baqonde izidingo zamakhasimende futhi baxazulule inkinga yabo ekukhulumisaneni okusebenzayo, bese bebuyisa imibuzo futhi badinga ochwepheshe nabaholi.
Ezobuchwepheshe — Sebenzisa iziphakamiso zamakhasimende ngenkuthalo zokuthuthukisa nokwenza imikhiqizo emisha ukwenza umsebenzi ube lula.
Ukukhiqizwa — Izinga elizinzile liyisisekelo sefektri, qhubeka nokuthenga izinto zokusetshenziswa ezinokwethenjelwa, ukuphathwa okuqinile kwemboni, inqubo yokukhiqiza ezinzile, namazinga wokuhlola aqinile.
Yenza isinqumo esifanele, esibhekele wonke umsebenzi namakhasimende.
Okuhlangenwe nakho- Nikeza ngemishini esezingeni eliphakeme kanye nohlelo lokugcinwa kwamatshe ezindaweni ezingaphezu kwezingu-30 emhlabeni jikelele iminyaka eyi-10.
Imikhiqizo- Imikhiqizo ehlukahlukene ngokukhetha kwakho. Imishini ehlukene nemiklamo emazweni ahlukahlukene, ama-ejenti ahlukahlukene wamatshe ukubhekana nezinkinga zamatshe ezahlukahlukene.
Isevisi --- isevisi yokuthengisa ngemuva kokuthengisa nephumelelayo futhi ikuvumela ukuba ungabi nazinkathazo.
BUKA LONKE ULWAZI